Wararka - Sidee loo xaliyaa dhibaatada EMI ee ku jirta Multilayer PCB design?
Ma taqaanaa sida loo xaliyo dhibaatada EMI marka qaabeynta lakabka PCB badan tahay?
Aan kuu warramee!
Waxaa jira qaabab badan oo loo xaliyo dhibaatooyinka EMI. Qaababka casriga ah ee xakamaynta EMI waxaa ka mid ah: adeegsiga dajinta xakameynta EMI, xulashada qeybaha xakamaynta EMI iyo naqshadeynta moodada EMI. Iyada oo ku saleysan qaabka ugu aasaasiga ah ee PCB, warqadani waxay ka hadlaysaa shaqada PCB stack ee xakamaynta EMI shucaaca iyo xirfadaha naqshadeynta PCB.
Soo boodka korantada soosaarka ee IC waxaa lagu dardargalin karaa iyadoo la dhigayo awooda ku habboon meel u dhow pin pin awoodda IC. Si kastaba ha noqotee, tani maahan dhamaadka dhibaatada. Sababtoo ah jawaabta soo noqnoqda ee xaddidan ee korantada, Suuragal uma aha in ay kabadhuhu soo saarto awooda is-waafajinta ee loo baahan yahay in lagu kaxeeyo wax soo saarka IC si nadiif ah qeybta bandhiga buuxa. Intaa waxaa sii dheer, korantada kumeelgaarka ah ee lagu sameeyay baska korantada waxay sababi doontaa hoos u dhac ku yimaada laba-geeska dhammaan habdhaqanka dariiqa qurxinta. Awoodahan kumeelgaarka ah waa habka ugu caansan ee ilaha faragelinta EMI. Sideen ku xallin karnaa dhibaatooyinkaas?
Arinta IC ee saaran gudeheena wareega, lakabka korantada ee ku xeeran IC waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay mid awood-sare leh oo awood badan, kaasoo aruurin kara tamarta ay soo deynayso tamarta korantada ee siisa tamarta sare ee soosaarka nadiifka ah. Intaa waxaa sii dheer, kicinta lakabka awoodda wanaagsan waa yar yahay, sidaas darteed calaamadaha ku-meel-gaarka ah ee ay soosaartay soo-saaraha sidoo kale way yar yihiin, sidaas awgeedna waxay yareyneysaa habka caadiga ah ee EMI.
Dabcan, isku xirka u dhexeeya lakabka soodhaweynta korontada iyo biinanka korontada bixiya ee IC waa inuu noqdaa mid gaaban sida ugu macquulsan, maxaa yeelay cidhifka sii kordhaya ee calaamadda dhijitaalka ayaa ka dhaqso iyo dhaqso badan. Waxaa fiican inaad si toos ah ugu xirato shaashadda meesha salka korantada IC uu ku yaal, kaasoo u baahan in si gaar ah looga wada hadlo.
Si loo xakameeyo nooca guud ee loo yaqaan EMI, lakabka korantadu waa inuu ahaadaa labo si fiican loo habeeyay oo lakabyo awoodeed si looga caawiyo qurxinta una lahaan karo anshax ku filan. Dadka qaar baa isweydiin kara, sidee bay u wanaagsan tahay? Jawaabtu waxay kuxirantahay lakabka korantada, sheyga udhaxeeya lakabyada, iyo inta jeer ee uu shaqeynayo (micnaheedu waa howl kicinta waqtiga IC). Guud ahaan, kala dheereynta lakabyada awoodu waa 6mil, iyo dhexdhexaadiyuhu waa qalab FR4 ah, markaa awoodda u dhiganta halkii mitir ee labajibbaaran ee lakabka korantadu waa 75pF. Sida iska cad, kala qaybsanaanta lakabka oo yar, awoodda weyn.
Ma jiraan aalado badan oo leh waqti korodh ah 100-300ps, laakiin sida ku xusan heerka horumarka hadda ee IC, aaladaha leh waqti korodhka tirada u dhexeysa 100-300ps waxay buuxin doonaan saami sare. Wareegyada leh 100 illaa 300 oo jeer PS kaca, 3 mil kala-soocidda lakabka mar dambe laguma dabaqi karo codsiyada badankood. Waqtigaas, waxaa lagama maarmaan ah in la qaato teknolojiyada 'delamination' iyada oo adeegsadku uu ku dheereyo wax ka yar 1mil, kuna beddelo walxaha 'FR4 dielectric' oo leh walxaha si joogto ah u sarreeya. Hadda, dhoobada iyo balaastigga dheriga ayaa buuxin kara shuruudaha naqshadda ee 100 ilaa 300ps sare u kaca wareega.
In kasta oo qalab iyo habab cusub loo adeegsan karo mustaqbalka, haddana 1 ilaa 3 ns oo wareegyada wareegsan ah, 3 illaa 6 mil dheereynta kala-goynta, iyo walxaha korantada ee 'FR4' ayaa badanaa ku filan inay la qabsadaan iswaafajin heer sare ah oo ay ka dhigaan calaamado ku-meel-gaadh ah oo hooseeya, taasi waa , habka caadiga ah EMI waa la yareyn karaa mid aad u hooseeya. Warqaddan, tusaalaha naqshadeynta PCB-ga ee lakabyada ayaa la bixiyaa, iyo kala-soocidda lakabka ayaa loo maleynayaa inay tahay 3 illaa 6 mil.
Marka laga fiiriyo dhanka tilmaanta wadada, istiraatiijiyad lakab wanaagsan waa inay ahaataa in la dhigo dhammaan raadadka calaamadaha hal ama dhowr lakab, oo ku xiga lakabka korantada ama diyaaradda dhulka. Awood bixinta, istiraatiijiyad lakab wanaagsan waa inay noqotaa in lakabka korontada uu kudhawyahay diyaaradda dhulka, masaafada udhaxeysa lakabka korontada iyo diyaaradda dhulka waa inay ahaataa mid yar sida ugu macquulsan, taas oo ah waxa aan ugu yeerno istiraatiijiyadda “lakabeynta”.
Xeelad istiraatiijiyad noocee ah ayaa caawin karta gaashaanka iyo xakamaynta EMI? Qorshahan xirmo ee soosocda ee soosocda waxay soo qaadaneysaa in awooda korantada ay ku qulquleyso hal lakab iyo in hal koronto ama voltaro badan lagu qeybiyo qeybaha kala duwan ee lakabka isku midka ah. Arinta lakabyada awooda badan ayaa laga wada doodi doonaa mar dambe.
Waxaa jira dhibaatooyin ka iman kara naqshadeynta 4-ta laminates. Marka ugu horeysa, xitaa haddii lakabka signiigu uu ku yaal lakabka dibedda oo awoodda iyo diyaaradda dhulka ay ku jiraan lakabka gudaha, masaafada u dhexeysa lakabka korantada iyo diyaaradda dhulka weli aad u ballaaran.
Haddii sharuudaha qiimaha uu yahay kan koowaad, labada qaab ee soo socda ee guddiga 4-ta dhaqanka ah waa la tixgelin karaa. Labaduba waxay hagaajin karaan waxqabadka xakamaynta EMI, laakiin waxay ku habboon yihiin oo keliya halka ay cufnaanta qaybaha ka kooban yihiin guddiga ay hooseyso oo ay jirto aag ku filan oo ka kooban qaybaha (si loo dhigo dahaarka naxaas ah ee loo baahan yahay si loo helo korantada).
Midda hore waa qorshaha la door bidaayo. Lakabyada kore ee PCB dhammaantood waa lakabyo, labada lakab ee dhexena waa lakabyo calaamado / xoog leh. Awooda korantada ee lakabka signalada waxaa lagu xardhay xariiqyo ballaaran, oo ka dhigaya dariiqa marinka sahayda korantadu inay hooseyso isla markaana carqalad ku noqota dariiqa microstrip hoose. Marka laga eego dhinaca xakamaynta EMI, tani waa qaabka ugu fiican 4-lakab ee PCB ee la heli karo. Qorsha labaad, lakabka sare wuxuu qaadaa awooda iyo dhulka, iyo labada lakabka dhexe waxay wataan seenyaalaha. Marka la barbar dhigo boodhadhka 4-daaha ee dhaqanka, hagaajinta qorshahan ayaa yar, isla markaana caqabada dhex-dhexaadiyuhu kama fiicna sida tan 4-daaqadii caadiga ahayd.
Haddii xariga korantada la xakameeyo, qorshaha kaydinta ee kor ku xusan waa inuu aad uga taxadaraa in fiilooyinka la geliyo jasiiradda korantada ee korantada iyo marinka dhulka. Intaa waxaa dheer, jasiiradda naxaasta ah ee korantada ama stratum waa in ay isku xirnaataa inta ugu macquulsan si loo hubiyo isku xirnaanta ka dhexeysa DC iyo soo noqnoqoshada hooseeya.
Haddii cufnaanta waxyaabaha ku jira boodhka 4-lakab ay weyn yihiin, saxanka 6-lakab ayaa ka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, saameynta gaashaanka ee qaar ka mid ah qorshooyinka isdaba-marinta ee naqshadeynta guddiga 6-lakab ma fiicna, iyo astaamaha ku-meel-gaadhka ah ee baska awoodda lama dhimayo. Laba tusaale ayaa hoos looga hadlay.
Xaaladda koowaad, korantada iyo dhulka waxaa lagu meeleeyaa lakabyada labaad iyo shanaad siday u kala horreeyaan. Sababo la xiriira xaddiga sareeya ee korantada xoogga korontada, waa wax aan wanaagsaneyn in la xakameeyo shucaaca guud ee shucaaca EMI. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida xakameynta xakamaynta calaamadaha, qaabkani aad ayuu sax u yahay.
Tusaalaha labaad, korontada iyo dhulka waxaa la dhigaa lakabyada seddexaad iyo afraad siday u kala horreeyaan. Naqshaddani waxay xallineysaa dhibaatada naafanimada korantada ee korontada. Sababtoo ah waxqabadka gaashanka korantada ee liita ee lakabka 1 iyo lakabka 6, qaabka kala duwan ee EMI wuu kordhayaa. Haddii tirada khadadka signalada ee labada lakab ay yihiin kuwa ugu yar oo dhererka khadadka ay aad u gaaban yihiin (in ka yar 1/20 oo ah hirarka isugeynta ugu sarreeya ee calaamadda), qaabeynta ayaa xallin karta dhibaatada qaab kala duwanaanta EMI. Natiijooyinka waxay muujinayaan in xakamaynta qaabka kala duwan ee EMI ay si gaar ah wanaagsan tahay marka lakabka kore uu ka buuxsamo naxaas oo aagga la huwiyay ee naxaasku uu salka ku hayo (1/20 kasta oo bareeg dherer ah). Sida kor ku xusan, naxaas ayaa la dhigi doonaa